The Ab Presents Nepal » यी ३ राशिहरु माथि भागुवान शिवले राख्छन सबै भन्दा बढी कृपा ! कमेन्टमा “ॐ” लेखी शेयर गर्नुहोस !
भागुवान शिवको आशिर्वाद र कृपा सबै रशिहरुमा हुने गर्दछ ! तर जसलाई भगवान शिव आफ्नो विशेष कृपा राख्दछन कर्कट राशि : वृष राशि पछि कर्कट राशि माथि भगवान शिव निकै खुशी हुन्छन र आफ्नो कृपा पनि बर्साउछन । यस राशिको मानिस शिवको भक्तिमा सधै तलिन रहन्छन । यस राशिको मानिस भगवान शंखरको कुनै पनि व्रत वा चाडपर्वमा व्रत राख्न छोड्दैनन । भगवान शिवको सधै यो राशि माथि कृपा रहने गर्छ |’
वृष राशि : यस राशिको जातलाई मंगल एकदम राम्रो मानिन्छ । वृष राशिको मानिस भगवान शिवको स्वरूपको निकै नजिक हुन्छन । यस राशिको मानिस चाहे दुखमा होस वा सुखमा सधै भगवानको जप गर्ने गर्छन जसकारण भगवान शिव यिनीहरुको हरेक कामना पुरा गर्ने गर्छन । यस राशिका व्यक्ति सोमबार शिव मन्दिर गएर शिवलिंगमा जल चढाउनु निकै शुभ मानिन्छ ‘।
मकर राशि : मकर राशिका जात भएका व्यक्ति भगवान शिवको ज्यादा करिब हुन्छन । यस राशिमाथि आउन लागेको आपदलाई भगवान शिवले पन्छाउने गर्छन। यी राशि भएका व्यक्ति जीवनको हरेक उतार चढ़ावमा भगवान शिवको नाम लिन भुल्दैनन । यसकारण भगवान शिव यी राशिमाथि आफ्नो कृपा बर्साउछन । सोमवारको दिन शिवलिंगमाथि दूध चढाउनाले यी राशिलाई एकदम फाईदाजनक हुनेछ ‘।
अन्य समाचार, लिवर अर्थात् कलेजोको सम्पूर्ण फोहोर वा खराबीलाई एकपटकमै हटाउने यो गोप्य घरेलु औषधी ! लिवर यानिकी कलेजोले हाम्रो शरीरमा एक केमिकल फ्याक्ट्रीले जस्तै काम गर्छ। अर्थात् तपाइँ जत्ति पनि बाहिरको जंक फुड, तेलमा तारेको भोजन, जाँड रक्सी र अनेकौं केमिकलयुक्त औषधी लगायतका पदार्थ खाएपनि यी चिजहरु बाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई कलेजोले शरीरबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। भोजन खाएपछी कलेजोले उक्त भोजनबाट आवश्यक पोषण तत्व ग्रहण गरेर शरीरको दोस्रो भागमा पुर्याउँछ’ ।
यदि नियमित महिनावारी हुने गर्नु भएको छ भने तपाईंको महीनावारी हुने दिन नाघिसक्दा पनि महिनावारी हुनु भएन भने तपाईं गर्भवती हुनु भएको छ । २. स्तनको आकारमा परिवर्तन देखिन सक्छ । तपाई)लाई लाग्नसक्छ कि तपाईंको स्तनको मुन्टो केही रसिलो भएको हुनसक्छ । र, स्तनको आकारमा पनि वृद्धि भएको हुनसक्छ ।
यस्तो भयो भने तपार्इं गर्भवती हुनुभएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।३. केही नखाँदा पनि गनाएको जस्तो हुने, हरेक कुरामा गनाएको आभास हुने, वाकवाकी तथा वान्ता नै आयो भने पनि तपाईं गर्भवती हुनुभएको थाहा पाउन सकिन्छ । ४. दिक्क लाग्ने, दिशापिसाव लागेजस्तो हुने तर नलाग्ने, मुड परिवर्तन भइरहने अर्थात घरी रिस उठ्ने घरी शान्त रहन मन लाग्छ ।५. घरी घरी पिसाव लागिरहने भयो भनेपनि तपाईं गर्भवती हुनुभएको हुनसक्छ । यस्ता लक्षणहरु देखिनासाथ गर्भको परीक्षण गराइहाल्नु पर्छ ।
आफ्नो मनाकाङ्क्षा पुरा हुने धार्मिक जनविश्वासका साथ मन्दिरको दर्शन गर्ने र भाकल चढाउन मालिकामा भक्तजनको घुइचो लागेको हो ।बैकुण्ठ चतुर्दर्शीको अवसरमा लाग्ने मेला र महोत्सवलाई मध्यनजर गरि मालिकाको दर्शन गर्न विभिन्न स्थानहरुबाटअघिल्लो दिन अर्थात विहिवार साँझदेखि नै टाढा टाढाबाट सवारी साधन र पैदल यात्रा गरि हजारौँ श्रदालु भक्तजनहरु मालिकादेवीको दर्शन आएको मालिका मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शर्माले बताए ।समतिका अध्यक्ष शर्माले भने दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरुलाई मध्यनजर गरि आज शुक्रवार विहानैदेखि मन्दिरमा परेवालाई बलीको रुपमा नचढाई परेवा शान्तीका प्रतिक भएको हुदा परेवालाई मन्दिरमा उडाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मेलासँगै मन्दिर आसपासमा रहेका होटल व्यवसाय,पुजा आरधनाका सामाग्री,र फलफूल लगायतबाट व्यापारीहरुले लाखौको कारोवार हुने गरेको छ।शिव बैकुण्ठ चतुदर्शीको अबसर पारेर विगत केहि बर्षयता निरन्तर रुपमा मालिकाको प्रसार प्रचार गदै मालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न टेवा पुगोस भनि विगत निरन्तर रुपमा मालिका महोत्सव आयोजना गदै आएको मालिका महोत्सव समितिका आर्थिक संयोजक रामप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।कञ्चनपुर । नेपालमा विश्वले अद्भूत मान्ने धरोहरु, प्राकृतीक केन्द्र र धार्मिक धरोहर रहेका छन् ।